Waxa Hadda ka Socdo Degmada SPPS - June 11, 2020
Bilihii Jiilaalka waa la soo gaaray!
Hambalyo inaad dhammeyseen sannad-dugsiyeed ahaa mid aan marnaba caadi aheyn. Haddii uu ardaygaagu ku soo noqonayo iskoollada SPPS deyrta waa ay haysan karaan iPad-kooda bilaha lagu jiro jiilaalka. Waaxda Community Education waxay wadashaqeyn la sameysay urur aamin ah oo dhallinyarada caawiyo si loo abuuro Saint Paul Connect, oo ah meel ay jiilaalkan qoysasku ka heli karaan hawlo iyo barnaamijiyo bilaash u ah caruurta. Saint Paul Connect wuxuu billaaban maalinka June 15.
U diyaargarowga Deyrta
Iyadoo la raacayo tilmaamaha ka yimid wasaaradda waxbarashada ee Minnesota Department of Education, degmada SPPS waxay ka fekeraysaa saddex qaab oo ay qorshaynaysaa sida ugu fiican ee aynu u haqab-tiri karno baahida ardaydeenna xag waxbarasho, xag bulsho, iyo xag shucuurba iyadoo hadda la gelayo sannad-dugsiyeedka soo socdo.
Xasuusta Marny Xiong
Dhammaan jaalliyadda Saint Paul waxay ka murugeysan tahay geeridii Marny Xiong oo aheyd Guddoomiyaha Guddoonka Waxbarashada ee SPPS. Waxaa sababsaday xanuunkii COVID-19 horraanta toddobaadkan. Guddoomiye Xiong waxay markhaati muuqdo u aheyd dadka meel fiican ka gaaray nolosha ee iskoolladeenna wax ku soo bartay, kuna dhex noolaa bulshadeenna. Waa la tebi doonaa.
Adeegga Cunto-bixinta Jiilaalka
Cuntada oo guryaha la keeno iyo cuntada laga qaadanayo geeska meesha basku soo istaago way sii socon doonaan jiilaalkan, oo cunto cusub ayaana cuntada lagu soo dari doonaa. Cunto-keenidda jiilaalka waxaa loo oggol yahay dhammaan ardayda deggan Saint Paul, ee ma ahan keliya ardayda dhigato iskoollada SPPS. Cuntada waxaa la keenayaa Isniinta ilaa Jimcaha, waxaana laga qaadan karaa geeska basku istaago iskoollada qaarkood Jimce walba. Hadda isdiiwaan-geli.
Jimicsiga iyo u Bixidda Bannaanka
Inaad u baxdid bannaanka waa wax u fiican caafimaadka qoyskaaga jir ahaan iyo maskax ahaanba inta jiilaalka lagu jiro. Waxaan idiin heynaa fikrado quseeyo inaad bannaanka ku sameyn kartid waxyaalo ammaan ah oo xiiso leh sida socodka, wadidda baaskiilka, waxbarasho lagu sameeyo bannaanka, iyo weliba hawlo kale oo jimicsi ah.
Kulanka Dhammaadka Sannadka ee Khadka Intarnetka
Haddii aad geftay kulankii khadka intarnetka iyadoo kombiyuutarka la iska daawanayo, wuxuu isku-duwaha guud ee SPPS Joe Gothard toddobaadkan horraantiisa la hadlay qoysaska isagoo ka jawaabay su’aalahooda. Ka daawo boggeena degmada ama gal lifaaqan YouTube hadda.
Lacagta EBT ee Saf-markan dartiisa
Qoysaska hadda qaato dheefta barnaamijyada SNAP ama MFIP, ama qoysaska u qalmo qadada bilaashka ah ama la dhimay ee iskoolka, waxaa loo oggol yahay inay helaan lacag ah $325 cunuggiiba – waana barnaamij cusub oo ay bixinayso dowladda federaalka Mareykanka.